မော်နီတာမာ ဘာမှတက်မလာဖူး — MYSTERY ZILLION
September 2008 edited March 2011 in Hardware
MZ က ကိုကို၊ မမ၊ မောင်လေး၊ ညီမလေး များး ကူညီကြပါအုံးး
ကွန်ပျူတာဖွင့်လိုက်ရင် "တီ" ဆိုပီးး "စက်" တက်လာရမာ
အဲ့ဒီအသံလဲမကြားရဖူး.. System ပုံးကြီးးက "၀ူး..၀ူး..၀ူးး" ဆိုပီးး သာလည်နေတာ
မော်နီတာမာလဲဘာမှပေါ်မလာဖူး ... အဲ့ဒါ ဘာဖြစ်လို့လဲ.. ( မော်နီတာလဲ ဖွင့်ထားပါတယ် )
ဖြစ်နိုင်ချေက တော့ မော်နီတာကြောင့်များလားပဲ။
မော်နီတာမှာ မီးအစိမ်းလေးလင်းနေလား။ မှိတ်တုတ် မှိတ်တုတ်ဖြစ်နေလား။ System Unit မဖွင့်ခင် တုန်းက စိမ်းပြီး System ဖွင့်လိုက်တော့မှ မှုတ်တိတ် မှုတ်တိတ် (အဲ့လေ) မှိတ်တုတ် မှိတ်တုတ် ဖြစ်လား။
ဒါမှမဟုတ် မီးအနီလေးပဲလင်းနေလား။ အရင်ဆုံးအဲ့ဒါတွေကြည့်လိုက်ပါဦး။
System ကရောပုံမှန်အလုပ်လုပ်နေလား။ ပုံမှန်အလုပ်လုပ်မလုပ်သိရအောင် Num Lock တို့ Caps Lock တို့ကို နှိပ်ကြည့်ရင်မီးလင်းလာ/ပိတ်လား သိနိုင်ပါတယ်။
Graphic Card နဲ့ Monitor နဲ့ ဆက်ထားတဲ့ ကြိုးကိုသေချာပြန်တပ်ကြည့်ပေးပါ။
ဟုတ်တဲ့... ကျေးဇူးးပါဘဲ noor ရေ..
Num Lock က ဖွင့်လို့ ပိတ်လို့မရဖူး.. လင်းးပဲနေဒါ... Monitor ကလဲ (မှိတ်တုတ်)2 ပဲ ဖြစ်နေတာ။ Graphic Card နဲ့ Monitor ကြိုးးလဲ ဖြုတ်ပီးးတက်ကြည့်လိုက်ပီးပီ..။ ရသေးဖူးဘဲ။
ကွန်ပျူတာဖွင့်ရင် "တီ" ဆိုတဲ့အသံလေးလဲမကြားရဖူး
အဲ့ဒါဆို System ထဲက တစ်ခုခုဖြစ်ပြီထင်တယ်ဗျ။ System အဖုံးကိုဖွင့်ပြီး ပါ၀ါကြိုးတွေ၊ Memory တွေ၊ CMOS Battery တွေ (၁၅) မိနစ်လောက်ဖြုတ်ပြီးမှသေချာပြန်တပ်ပြီး စမ်းကြည့်ပါဦးလား။ Graphic နဲ့ memory ရဲ့ (ကြေး)ကြီး ပင်လေးတွေကို ခဲဖျက်နဲ့ဖျက်လိုက်။ ခဲဖျက်အမှုန်တွေ သေချာခါ ပြီးပြန်စမ်းကြည့်ပါဦးလား။ Graphic Card က On board ဆိုရင်တော့ မလိုဘူးနော်။ စမ်းကြည့်ပါဦး။ အဆင်ပြေပါစေ။ MZ မှ ၀ိုင်းတော်သားညီအကိုများလည်း အကြံပေးပါဦး။ ကျွန်တော် လည်းသိသလောက်ပြောတာပါ။ လေးဖက်ထောက်အရွယ်လေးမို့ပါ။
jujuu wrote: »
အရင်က ကြားရလား.. အဲ တီ ဆိုတဲ့အသံက.... RAM တွေဖြုတ်ပြီး စမ်းကြည့်ပါဦး.. ဟ.. အဲမှာ တီ တီ တီ တီ နဲ့ အော်နေရင် RAM တွေ၊ RAM slot တွေ ဖုန်သုတ်ပြီး ပြန်စိုက်ကြည့်.... အဲ ဒါဖြစ်နိုင်ခြေ အများဆုံးပဲ... :P:P:P
Power Supply Volt မမှန်တာတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး.. အဲလိုဆို... Power ကို On မှာ မဟုတ်ဘူး...
ဖြစ်ချင်းဖြစ်ရင် Processor ကဖြစ်မယ်ထင်တယ်....
တစ်စုံလုံးသာ အသစ်ဝယ်လိုက်တော့... ဂျူးဂျူးမရေ... မီးပျက်ပီဟ... အောက်ပီ.. :P:P:P
ကျွန်တော့်အထင် memory ကဖြစ်တာပါ။ လဲစရာရှိရင်လဲစမ်းကြည့်ပါ။ ၂ချောင်းရှိရင်တစ်ချောင်းခြင်းဖြုတ်စမ်းကြည့်ပါ။
ဂျားဂျားစတူးရေ... ကိုညမီးအိမ်ပြောတာ အဖြစ်နိုင်ဆုံးပဲဟ... နာ့ဟာလဲ ခဏခဏဖြစ်တယ်... ခဲဖျက်တောင် ဆောင်ထားရတယ်... :D
စမ်းစရာ ram အပိုမရှိရင် မုံရွာလာခဲ့.. နာ့ဟာ ခဏငှားလိုက်မယ်... ပီးရင်ပြန်လာပေးပေါ့... :P:P
တီ လို့မမြည်ဘူးဆိုရင် တော့ ကျွန်တော်ထင်တာ က ဘုတ်ကြောင်နေတာပါ ...
Memory ကိုဖြုတ်တယ် ... ပြီးတော့ ပါ၀ါကို ဖွင့်တယ် ... Memory Alarm ပေးပြီဆိုရင် ရပါပြီ ...
ပါ၀ါပိတ်ပြီး ပြန်တပ်လိုက်တယ် .. ကောင်းသွားရော
Memory ကိုတော့ Clean လုပ်လိုက်တာပေါ့ ...
အဖြေတွေအားလုံး GOOD တယ် ။ မရခဲ ့ဝူးဆိုရင်...............
တင်ဒါ တစ်ပုလင်း သာဝယ်လိုက်.....and then
CMOS battery ကို အရင်ဖြုတ်ထားပါ
CPU ဖြုတ်ပြီး ၎င်းအောက်က transistor & diode တွေကို တင်ဒါ နဲ ့clean လုပ်လိုက်...
RAM ပတ်ပတ်လည်က transistor & diode တွေကို တင်ဒါ နဲ ့clean လုပ််လိုက်...
and then.....waitamoment,until it's dry.
Next ....setup your hardware.
and then open the power.
memory ကြေင့်လို့ထင်ပါတယ်။memory ချောင်းကိုဖြူတ်ခဲဖျက်နဲ့ကြေးချောင်းလေးတွေကိုပွတ်ပါပြီးရင် brush နဲ့ memory slot ကို ဖုန်ခါပါ။တကယ်လို့ ၂ချောင်း စိုက်ထားရင် ၁ချောင်းစီ စမ်းကြည့်နော်။အဆင်ပြေပါစေဗျာ။:6::6::6:
Hi there ......... :6:
Is GooGooSter from Monywa? If so, sooo nice to be friend with you because I love Monywa as well as " Monywa Thu sssss " ( Not include Monywa Tharr sss naw ... ) :P
I live in Ygn but now I am in Maw Gyun( Ayawaddi ) on duty. I will come to Monywa within this year 2008 and will come to you too ... Will you kick me off? ... he hee :P
ုkeyboard hang နေရင် memory ကြောင့်ဖြစ်တာပါ၊
"တီ"ဆိုတဲ့အသံမကြားရရင် Motherboard ဖြစ်ဖို့များတယ်ဗျ။
တပ်ထားတယ်ဆိုရင် Memoryကိုဖြုတ်ပီး စက်ကိုဖွင့်ကြည့်။
M O T H E R B O A R D ပျက်ပီ။
1 short beep:Normal POST - system is ok
2 short beeps :POST Error - error code shown on screen
No beep :Power supply or system board problem
Continuous beep :Power supply, system board, or keyboard problem
Repeating short beeps :Power supply or system board problem
1 long, 1 short beep :System board problem
1 long,2short beeps :Display adapter problem (MDA, CGA)
1 long,3short beeps :Enhanced Graphics Adapter (EGA)
3 long beeps :3270 keyboard card
ကျွန်တော်လက်လှမ်းမှီသလောက် Beep message ကလေးအကြောင်းကို ဆွေးနွေးလိုက်ပါတယ်။ဒီကောင်လေးကို ဖတ်ပြီး ဘယ်နေရာက အယ်ရာလည်းဆိုတာကို သိနိုင်မှာပါ။ အားလုံးကို ခင်မင်တတ်သူ ။အညာသားလေး..........:5::5::5:
နောက်ထပ် error message အသံကလေးများကိုလည်းကြည့်ပြီး ကွန်ပျူတာ system error များကို ဖြေရှင်း ပေး နိုင် ပါတယ်။
1 Long Beep,2Short Beeps - Video adapter error
1 Long Beep,3Short Beeps - No video card is present or video RAM is bad
High-Pitched Beep/Low-Pitched Beep (repeating) - Processor error
High-Pitched Beeps (repeating, may sound after the boot process) - Processor
All Other Beep Codes - Memory error
သူတို့လေးတွေကိုဖတ်ပြီးဖြေရှင်းပေးလို့ရမယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အနာသိရင် ဆေးရှိတယ်ဆိုသလို။ ကွန်ပျုတာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖြေရှင်းဖို့ဆိုတာဘာမှမခက်ပါဘူး။ဒီ beep message ကလေးများနှင့်ပတ်သက်ပြီးနားမလည်သည်များရှိခဲ့ရင် ကျွန်တော့်ကို ပြန်လည်မေးမြန်းနိုင် ပါတယ်။သိတဲ့သူများကလည်း ဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းပေးကြဖို့ရန် တောင်းဆိုပါတယ်ခင်မျာ။
တီသံမကြားရရင် memory ဖြုတ် graphic card ရှိရင်ဖြုတ်
စက်power on ကြည့်၊ CPU Fan လည်တယ်၊ တီသံမကြားရရင်တော့ mother board Error
တွေကြားရင် memory ပြန်ထိုး စမ်း graphic card ရှိရင်ပြန်တပ်စမ်းကြည့်ပါခင်ဗျား။
အင်းဟုတ်တယ်ဗျ memory ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ် ကျွန်တော်တုံးကဆို power မီးလင်းတယ်ဗျ harddisk မီးမလင်းဘူး ပြီးတော့ motherboard မီးလည်းလင်းတယ် power on လိုက်တော့ စက်က တ၀ူူး၀ူးဆိုလည်နေတာပဲ ဒါပေမယ် monitor မှာဘာမှမလာဘူူး နောက်တော့ memory card ပင်ချောင်းလေးစောင်းနေတယ် ဟီး ဘယ်လောက်တောင်ထိုးထည့်ထားလဲမသိဘူး ဟီး
memory ကကောင်းတယ် ... ဒါပေမယ့် .. မော်နီတာမှာဘာမှမလာဖူး ဆိုရင်ကော .. cpu fun ကတော့ တ၀ူး၀ူးလည်နေတာပဲ ...
ဖြေထားတာတွေ အတော်များတော့ ပြေလည်လောက်ပြီလားဗျာ
ဂျူး ရေ ...
Casing charge error ကြောင့်လဲ ဖြစ်တတ်တယ်ဗျ
Main Board ကို အပြင်မှာ ထုတ် ပြီး စမ်းကြည့် လိုက်ပါ့လားဗျ အဆင်ပြေနိုင်တယ် ....
Memory မေကာင္းတာျဖစ္ႏွိင္တယ္ ဒါေပမယ့္စမ္းၾကည့္လိုက္ပါဦး သူမ်ားဆီကMemory ငွားၿပီးေတာ့ေလ ေသခ်ာတယ္ဆိုရင္ေတာ့ memory အသစ္၀ယ္လိုက္ပါ
monitor မီးမလင်းရင် graphic card ဆိုက်ထားတယ်ဆို ရင် graphic card ဖြုတ် ပြီး on board မှာ တပ် ပြီးစမ်းပါ။မရရင် monitor ကိုစမ်းပါ။မရခဲ့ရင် motherboard ကို ဖုန် သုတ် ပါ။ ဒါမှမဟုတ်စက်ဖွင့်တဲ့အချိန် မှာ question mark ပြတယ်ဆိုရင်တော့ monitorခေါင်းရဲ့ pin တွေကို စစ်ပါ။
memory လု့စ် ဖြစ်နေတာလဲဖြစ်နိုင်တယ်။ကျွန်တော်လဲကြုံဖူးတယ်။တစ်ခါဆို power on လိုက်offလိုက်ဖြစ်တာ ပြီးတော့ monitor လဲမတက်ဘူး။CPUလဲလိုက်ရတယ်။မှားတာပါရင်တောင်းပန်ပါတယ်။